How to find the high search volume keywords for Amazon listing optimization?
Kana uine chigadzirwa chakanaka chokutengesa kuAmazon, iwe unofanirwawo kuva nehutano hwakanaka hwokutengesa. Iwe unofanirwa kuita kuti unyanzvi hwako hwevatengi hutenge zvakanyatsonaka mishonga yako panzvimbo yemakwikwi ako emakwikwi. Pamusoro pekushanda kwako kwekugadzirisa, iwe unoda kutungamira zvakadzama keyword tsvakurudzo - wohnungswechsel post schweiz. Kuti uite nenzira yakarurama iwe unogona kubhadhara imwe nyanzvi muAmazon optimization field kana kushandisa special keyword research software. Zvakakosha kuwana zvose zvinotsvaga kutsvaga mazwi panguva imwechete, kwete kudzokera kune ino musoro mune ramangwana. Kukanganwa mamwe mazwi anokosha kunogona kutungamirira kumari, uye mikana matsva inorasikirwa. Mashoko ekuti ane tsvakurudzo yakanyanya kuAmazon ichakubatsira kuti umire zviri nani kudarika makwikwi ako uye uite zviri nani kutengesa.
Muchikamu chino, tichakurukura nezve dzimwe nzira dzekuita kuti uwane zvakanyatsotsvakurudza mazwi ezvinyorwa uye kuvandudza kutarisa kwako kuonekwa pa Amazon tsvaga. Uyezve, tichakurukura zvakanakisisa zvikuru mazwi ekutsvakurudza mashandisi ayo achashanda semumwe mubatsiro mukushanda kweAmerican listing kugadzirisa.
Keyword research is an integral part of your Amazon product listing optimization. Iko kunosanganisira kutsvaga zvose zvakakosha uye zvinotsvaga kutsvaga mazwi kune chimwe chinhu chakagadzirwa. Dhiyabhorosi-kutsvaga kutsvaga mazwi ndiwo mazwi ayo angangodaro mutengi angashandisa kuwana chigadzirwa chako pa Amazon search results page.
Tsvakurudzo yekodzero yepamusoro inofanira kusanganisira zvinhu zvakadai sokutsvakurudza kwemashamba, kuongorora kwekutsvaga uye kukwikwidzana. Uyezve, iwe unofanirwa kuongorora tsananguro yekunyadzisa kuti unzwisise zvavanotsvaga mune dzimwe nguva.
Sekutonga, hazvigoneki kutora mashoko aya ose. Ndiko kusaka vatengesi vakawanda vari paIndaneti vanowanzoshandisa purogiramu yepaIndaneti.
Ndinokurudzira kushandisa zvishandiso zvinotevera sezvo vachigona kukupai zvakanyatsonaka data:
Chinhu chinowanzoshandiswa pakushandisa mazwi ekutsvakurudza iGoogle Keyword Planner. Iwe unogona kushandisa dhiyabhorosi inopiwa nechokushandisa ichi sevamiririri veAmazon yako content optimization. Zvisinei, unofanirwa kuziva kuti Amazon inoronga hurongwa hwakasiyana zvakasiyana neGoogle imwe. Ndicho chikonzero mazano ezvinyorwa, iwe uchatora kushandisa shanduro iyi, haichave yakanyatsokwana. Iwe unoda kushandisa mamwe mafuta eAmazambique kuti uwane mufananidzo wemhando uye nhamba dzekutsvakurudza kwakaitwa kwezvigadzirwa kuAmazon.
SEO Chat Keyword Tools
It is number one Keyword Suggestions Tool on web. Inopa autosuggest data yeAmazon, Google, YouTube, uye Bing. Zviri nyore chaizvo kudai iwe unoda kuenzanisa kusiyana kwekuti iwe unogona sei vatengi kutsvaga mune dzimwe nzira dzekutsvaga.
Chirongwa ichi chinogona kuvharidza mamwe mazwi ekutsvaga kwemashure kwenguva refu nekushandisa izwi rekutanga raunopinda muhurongwa. Kana ukasarudza zvose zvawanikwa uye ukanyora pane bhokisi rekuratidza, shandisi inoshandisa zvose zvinyorwa zvinyorwa zvadzo zvakare kuburikidza ne Amazon's search box. Tsvakurudzo iyi ichapa nemashoko akawanda anonyatsobudisa mazwi.
Kana iwe uri mutsva kuAmazon uye uchida kusarudza kuti ndeupi mushambadzi wepamisika unonyanya kukodzera zvebhizimisi rako, Amazon Niche Analyzer ndiyo yaunoda. Inobatsira kuziva kuti zvipi zvaunogona kutengesa uye pamutengo upi. Uyezve, kushandisa shanduro iyi, unogona kuenzanisa kuti muchadzorera mari yakawanda kubva kupi.
Uyezve, chigadziro ichi chichakubatsira kutarisa mazano emakwikwi ako uye nzvimbo dzepamusoro. Iwe unogona kuziva maitiro avo emari, chengetedza shoko rekutanga уranking uye kuongororwa kwekutengesa mari. Semrush
Semrush ipurogiramu yekugadzirisa basa iyo inoshandiswa nokuda kwezvinangwa zvakawanda zvekugadzirisa zvinosanganisira keyword research. Ichi chishandiso chinogona kukupa iwe zvakakosha uye zvakatsvaga kutsvaga mazwi mumaminitsi mashoma. Uyezve, inoratidza mazwi omukwikwidzi wako uye maitiro avanoita navo. Chinhu chose chaunoda ndechokukopa yako mpikisano's URL urongwa, uye Semrush tool ichakupa nemamwe mazita ezvinyorwa ivo vanozvidzivirira.
Zvingangodaro sei kutsvaga kutsvaga kutengeswa kwako kuAmazon?
Your Amazon products products will show in page search results if your listings contain all keywords that a customer typed into the search query. Kana iwe warasikirwa neshoko rimwechete, ipapo chigadzirwa chako hachimiriri mukana wekuonekwa mumigumisiro yekutsvaga, uye shure kwaizvozvo, iwe uchanasikirwa nekutengeswa.
Chinangwa chikuru chekutsvakurudza kwemashoko ndekuita runyora rwemashoko ose okutsvaga anoshanda kune chimwe chigadzirwa. Kana iwe uchikwanisa kuisa mazano ekutsvaga kutsvaga mazwi Amazon keywords mubhuku rekutsvakurudza mashoko, keyword kutsva ichaita kuti vamwe vatengi vaone chigadzirwa chako, chengeta pairi uye pakupedzisira muve vatengi vako.
Mawaniro ekutsvaga mashoko ekutsvaga ma Amazon maitiro?
Kuwa kokutanga, ndingadai ndichitaura kuti unoda kurongeka paunenge uchitsvaga kutsvakurudza kwezvinhu zvako. Ichakubatsira iwe kuti uve wakarurama uye urege kurasikirwa chero ruzivo rwakakosha. Kugadzira mazwi ezvinyorwa mumapoka akasiyana-siyana kuchakubatsira kuti urongedze, uye uite. Aya mazwi makuru anogona kunge ari wekutanga uye wechipiri. Primary keywords ndeavo vanoparadzira mutengo wechiko. Inogona kunge inotsanangurwa kutsvaga mazwi anoratidza chigadzirwa uye anotsvaga maitiro ayo anokosha. Secondary keywords are more general search terms that can be used when searching for the primary keywords. Inogona kushandiswa kumashoko anonyanya kukanganisa boka rinotarirwa, rudzi rwevanhu, rudzi rwekushandisa, kana chimwe chigadzirwa chemichero.
Saka, kuitira kuti kutsvakurudza kwemashoko enyu kuite, munofanira kugovera mazwi ose ekutsvakurudza anotsvaga muzvikamu zviviri zvinokosha - primary and secondary. Nekufamba kwenguva, ichakubatsira iwe kuti uuye pamwe nekusanganiswa kwakatsvaga kutsvaga kunogona kusimbisa mao Amazon yako.